Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba eziHlumayo zase-UK » Uninzi lweBrits alunakuze luthandaze Amashishini angaGunyaziswanga
Ukwaphula Iindaba zaseYurophu • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Culinary • Iindaba zeMpilo • Icandelo lokungenisa izihambi • Iihotele kunye neeholide • iindaba • Ukwakha kwakhona • Xanduva • Safety • Shopping • Tourism • uthutho • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku • Iindaba eziHlumayo zase-UK • Iindaba ezahlukeneyo
Uninzi lweBrits alunakukhusela ishishini elingagcinwanga
Ngaphantsi kwesiqingatha seBritane bavakalise ukuvuma ukuqhubeka nokusebenzisa ingcali engagonywanga.
I-22% yabaphenduli bathi "ngokuqinisekileyo" ayisayi kuphinda isebenzise iinkonzo zeengcali ezingagonywanga.
I-29% yabaphenduli bathi "mhlawumbi" banokuphepha iingcali ezingafunyenwanga.
I-20% yeBrits iya kuthi "mhlawumbi" isebenzise amashishini angagonywanga.
Ngokophando lwamva nje olwenziweyo kunye noluthunyelwe izolo, ngaphezulu kwamashumi amahlanu eepesenti kubahlali base-UK abayi kubuyela kwishishini ababelisebenzisa ngaphambili ukuba umntu oqhuba ishishini ebengagonywanga.
Njengoko ilizwe liqhubeka lishushubezela kurhulumente Izithintelo ze-COVID-19 kwezorhwebo kunye nokuhamba, ngaphantsi kwesiqingatha seBritane bavakalise ukuvuma ukuqhubeka nokusebenzisa ubuchwephesha obungafunyenwanga.
Phantse ikota (22%) yabo bavotelweyo bathi "ngokuqinisekileyo" abasayi kuphinda benze ushishino neengcali ezingagonywanga, nokuba bebesenza imicimbi elungileyo ngaphambili.
Kuphononongwe abantu abadala abangama-4,631 base-Bhritane, i-poll ifumanise ukuba uninzi-lwe-29%-lwabaphenduli bathe "ngekhe" bangaphindi basebenzise ingcali ababekade beyixhasa ngaphambili besazi ukuba "abathathanga kwaye [abazukuthatha] i-COVID -19 ugonyo. ”
I-20% yabantu baseBritane bebesocingweni, bevuma ukuba "baya kuhlala besebenzisa" oqeqeshiweyo, ngelixa i-14% ibiya kunamathela kubuchwephesha babo, ukudubula okanye ukungadutyulwa. Intsalela ibingaqinisekanga- kodwa kungafuneka benze isigqibo kungekudala, njengoko urhulumente wase-UK eqhubeka nokucinga ngokukhutshwa kwepasipoti yokugonya kwilizwe lonke emva kokubhengeza ukuba kufuneka babuyele kwiindawo zasebusuku emva kokuvalelwa.
Abaphenduli kumazantsi e eNgilani bekunokwenzeka ukuba bajike ngokuchasene neengcali zabo ezingagonywanga, ngelixa abo bakumantla bekunokwenzeka ukuba baqhubeke nokusebenza nabo. Ngokukwanjalo, abavoti abagcinayo banamathuba amaninzi okugcina iingcali zabo, ngelixa i-Liberal Democrats yayiyeyona nto inokubabeka ecaleni.
Abaphenduli bovoto kubonakala ngathi baya besamkela ngakumbi isithintelo esibekwe kwimisebenzi yabo ngurhulumente, nge-60% ebonakalayo exhasa "iipasipoti zokugonya" kuye nawuphina umntu otyelele ikhaya labongikazi, indawo yomthambo, indawo yomnyhadala, indawo yokutyela, indawo yokutyela, okanye enye indawo yokuhlanganisana kolunye uvoto iqhutywa ngu-YouGov kwiveki ephelileyo. Nangona kunjalo, umbuzo wawubhalwe ngokwahlukileyo ngokwahlukileyo, kugxininiswa ukunqongophala komhla wokugqibela ekusetyenzisweni kweepaspoti ngokubuza abaphenduli kuphela ukuba bayazixhasa iipasipoti zokugonya ngexesha lokukhutshwa kwejab.
I-Brits ayizukuba yeyokuqala ukuba nenkqubo yepasipoti yokugonya inyanzeliswe ngaphandle kwegalelo labavoti. I-Itali kunye neFrance sele zamkele ukupasa kwezempilo ngaphandle koqhanqalazo olubanzi, kwaye amanye amazwe aseMelika noomasipala bathanda City New York Baye bacenga amashishini abucala aseMelika ukuba anyanzelise ugonyo ngeepaspoti zabo zezempilo. Amanye amazwe anyanzelise ukuvala ezo pasipoti, ekhokelela kurhulumente wobumbano (okwangoku) ukushiya kuye nakumashishini.